के हो छालामा चमक ल्याउने ग्लुटाथिओन? केबाट पाइन्छ? – Health Post Nepal
२०७९ वैशाख २१ गते ११:०९
काठमाडौं–छालामा चमक ल्याउन आजकाल ‘ग्लुटाथिओन’ को प्रयोग बढ्दो छ। यसले छालाको क्वालिटी र नरमपनामा वृद्धि गर्छ। ग्लुटाथिओ सबैभन्दा प्रभावशाली एन्टिअक्सिडेन्टमध्ये एक मानिन्छ। यसले छालामा निखाल ल्याउन मद्धत गर्छ, मेलानिन लेभल पनि कम हुन्छ। त्यसैले आजकाल मानिसहरुले स्कीन ट्रिटमेन्ट र थेरापीमा ग्लुटाथिओन प्रयोग गर्ने क्रम बढेको हो। यो क्रिम या ट्याब्लेटको रुपमा पाइन्छ।
कसरी काम गर्छ ग्लुटाथिओनले?
यसमा धेरैमात्रामा अमिनो एसिड हुन्छ। यो छालाका लागि एकदम सुरक्षित मानिन्छ। किनकि, यसमा छालालाई नोक्सान पु¥याउने विषाक्त पदार्थ हुँदैन। छालालाई सफा बनाउन र सबै फोहोर पदार्थलाई शुद्ध पार्ने काम यसले गर्छ, जसले छालामा चमक ल्याउँछ। यसको प्रयागबाट छालामा हाइपर पिगमेन्टेशन पनि कम हुन्छ। छालामा भएको विषाक्त पदार्थ हटाउने इन्जाइमलाई सक्रिय पार्छ।
छालालाई गोरो बनाउन प्रयोग गरिने ग्लुटाथिओनका थुप्रै उत्पादन हुने भए पनि प्राकृतिक तरिकाबाट प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यसमा पाइने अमिनो एसिडले छालालाई स्वस्थ र सुरक्षित राख्छ।
यस्तै, ग्लुटाथिओनले बढ्दो उमेरसँगै छालामा आउने परिवर्तनलाई रोक्छ र छालाबाट कालो दाग या चाउरीलाई हटाउँछ। बाहिरी प्रदूषणबाट छालालाई सुरक्षा प्रदान गर्छ।
खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ
ग्लुटाथिओनबाट मात्र नभई उचित खानपानको माध्यमबाट पनि छालालाई स्वस्थ राख्न सकिन्छ। डाइटमा गोलभेंडा, सुन्तला, कागमती, अमला, एभोकाडोजस्ता फल र तरकारी सामेल गर्नुपर्छ। यिनमा एन्टिएजिङ गुण हुन्छ। पनीर या दूधबाट निर्मित सबै खाले पदार्थबाट ग्लुटाथिओन बन्छ। यसले छालामा रहेको दाग, धब्बा, एजिङका चिन्हहरु कम गर्न सहयोग गर्छ।
यस्तै, भिण्डीको रसमा निकै मात्रामा ग्लुटाथिओन पाइन्छ भने गहिरो निद्रा र नियमित अभ्यासनले पनि शरीरमा आफैं ग्लुटाथिओन बन्छ। त्यसैले नियमित अभ्यास र योग गर्ने मानिसहरुको छालामा चमक आएको देख्न सकिन्छ।
तर मदिरा र धूमपान ग्लुटाथिओनका शत्रुजस्तै भएकाले यिनको सेवनबाट बँच्नुपर्छ।
ग्लुटाथिओनको प्रयोग तुलनात्मक रुपमा महंगो पर्छ। तर यसको क्रिम र लोशन केही सस्तोपर्छ। तर यस्ता उत्पादनको प्रयोग अघि डाक्टरको सल्लाह भने लिनुपर्छ।
ग्लुटाथिओनको निर्माण हामीले खाने खाना र जीवनशैलीमा निर्भर गर्छ। यो शरीरलाई निकै आवश्यक चिज हो। शरीरका हरेक प्रणाली, शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि यो निकै जरुरी मानिन्छ। यसले एजिङको प्रक्रियालाई धिमा बनाउँछ।